Adiresy IP - Websetnet
Tag: adiresy IP
Ny High Sierra dia ny famoahana macOS farany ho fanohanana 32-bit apps "tsy misy marimaritra iraisana", hoy i Apple
Fantatsika fa ny iOS 11 dia manamarika ny faran'ny làlana ho an'ny 32 bit-apps ho an'ny lova ary ankehitriny dia mianatra momba ny fepetra vaovao 64 bit kely Apple ho an'ny Mac apps isika izao. Tao amin'ny mpanolo-tsainan'ny Dev Center omaly, nanambara ny goavan'ny Cupertino fa ny MACOS High Sierra no farany ...
Nahita adiresy IP ny Windows
Ny sasany amin'ireo mpampiasa Windows, izay mampiasa ny seranan-tserasera Ethernet amin'ny ordinatera maro dia mety hahazo adiresy IP adiresy Network Error - Ny solosaina hafa eto amin'ity tambajotra ity dia manana adiresy IP toy ity ordinatera ity. Mifandraisa amin'ny mpandrindra ny tambazotra azonao atao hamaha ity olana ity. More details are ...
Ahoana ny fijerena ny adiresy IP an'ny mpifaninana
Ao amin'ny "Ahoana no hijerena ireo mpilatsaka hofidiana PPC anao," ny lahatsoratro tamin'ny volana Aogositra, dia niresahako ny handeha amin'ny "fomba fialantsasatra" amin'ny alàlan'ny fanesorana ny adiresy IP an'ny mpifaninana ao amin'ny Google AdWords sy ireo sehatra pay-per-click. Izany dia manakana ny mpifaninana tsy hahita ny dokam-barotra PPC. Tsy vitan'ny hoe mitazona ny mpifaninana amin'ny ...
Mandray ny toerana misy ny adiresy IP na ny anaranao amin'ny PowerShell
FreeGeoIP.net dia tranonkala maimaimpoana maimaim-poana izay manome HTTP API ho an'ny mpikirakira ny rindrambaiko mba hitady ny geo-toerana misy adiresy IP na anarana nomena anao. Mampiasa birao amin'ny adiresy IP mifandraika amin'ny tanàna miaraka amin'ny fampahalalana hafa ilaina toy ny zone, ...
Fomba hitadiavana ny adiresy IP an'ny router
Ny fametrahana ny adiresy IP an'ny router dia ny teboka fanombohana ho an'ny orinasa maro rehefa mijery ny tambazotran'ny birao. Ny adiresy IP an'ny router dia tena zava-dehibe amin'ny fanavaozana ny fikirakirana, fanovana ny fikirakirana tambajotra ary ny fanatanterahana ny fanodinana ankapobeny. (Jereo koa: Ahoana ny fanavaozana ny firmware anao) Vakio manaraka: 10 antony ...
Ahoana ny fomba fampandehanana firmware router
1. Ahoana no fomba amam-panaovan'ny router router: Tadiavo ny isa nomen'ny router Ataovy marika amin'ny antsipiriany ny router anao, arakaraka ny router ny fampiasanao, mety mety hilaina aoriana izany. Ny mombamomba ny môteran'ny router dia miorina eo amin'ny sehatry ny router. Its ...
Fomba hitadiavana ny adiresy IP adiresy
Ny mpandidy sy ny manam-pahaizana ao amin'ny tambajotran'ny ordinatera amin'izao androntsika izao dia manana fanoloran-tena mba hianarana fototra sy hevitra mialoha. Maniry mafy ny hahafantatra ny fomba hidirana azy ireo izy ireo ary hampiasa ny varavarana fidirana avy hatrany. Izy ireo no mahazo ny fanatsarana tato ho ato amin'ny tambazotran'ny ordinaterany ...
Ahoana ny fametrahana adiresy IP amin'ny Windows sy OS X
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny ordinatera sy fitaovana ao amin'ny tambajotra dia mahazo adiresy IP amin'ny DHCP. Ny DHCP dia rafitra iray izay ahafahan'ny mpampiantrano iray, toy ny router na server, mamoaka adiresy IP amin'ny fitaovana mba hahafahan'izy ireo mifandray amin'ny mpivarotra sy ny iray hafa ...
Ahoana ny fametrahana sy ny fametrahana ny Cluster MySQL amin'ny CentOS 7
Ny fomba fametrahana sy ny fametrahana ny Cluster MySQL ao amin'ny CentOS 7 MySQL Cluster dia natao hanomezana ny tahirin-tserasera MySQL miaraka amin'ny avo malalaka sy ny tsy fahampiana ambany. Ny teknolojia MySQL Cluster dia ampiharina amin'ny alàlan'ny NDB (Network DataBase) sy ny milina fanenana NDBCLUSTER ary manome sehatra tsy misy dikany ary tsy misy ...
Setup ATA amin'ny Ethernet (AoE) amin'ny Debian 8 (mpikatroka sy tanjona)
Setup ATA amin'ny Ethernet (AoE) ao amin'ny Debian 8 (Mpandrindra sy Target) Ity lesona ity dia mampiseho anao ny fomba fametrahana mpampiasa AoEe (initiator) sy seriver (loka) amin'ny Debian 8 / Jessie). Ny teny hoe AoE dia midika hoe "ATA amin'ny Ethernet" izay sehatr'asa fisorohana fandrakofam-panorenana (SAN) izay natao ...
Fikojakojana avoavo amin'ny GlusterFS amin'ny Debian 8 - Mirror amin'ny servisy roa fitehirizana
Fitaovana avo lenta amin'ny GlusterFS amin'ny Debian 8 - Miraretra amin'ny servisy fitehirizana roa Ity lesona ity dia mampiseho ny fomba fametrahana tahirin-drakitra avoakan'ny servisy roa (Debian Jessie) mampiasa GlusterFS. Ny mpizara fitehirizana tsirairay dia ho fitaratra amin'ny servisy fitehirizana hafa, ary ny rakitra ...
Ahoana ny fametrahana Cluster Proxmox VE 4 Multiple Cluster
Ny fomba fametrahana proxmox VE 4 Multiple Cluster Cluster Proxmox VE 4 dia manohana ny fametrahana cluster ary ny fitantanana ny serivisy maro mpampiasa Proxmox. Azonao atao ny manokatra tambajotra Proxmox maro avy amin'ny konsole fitantanana tranonkala iray. Ity endri-javatra ity dia tena tsara raha manana ianao ...
Ahoana ny fametrahana TYPO3 7 amin'ny Nginx sy MariaDB amin'ny Debian 8 (Jessie)
Ahoana ny fametrahana TYPO3 7 amin'ny Nginx sy MariaDB amin'ny Debian 8 (Jessie) Ity lesona ity dia mampiseho ny fomba fametrahana sy fametrahana tranonkala TYPO3 (version 7) amin'ny tranonkala Debian 8 (Jessie) izay manana Nginx ho tranonkala web ary ny MariaDB tahaka ny server server. ...
Ny fametrahana Nginx amin'ny PHP (amin'ny PHP-FPM) sy ny MariaDB (LEMP) amin'ny Debian 8
Ny fametrahana Nginx amin'ny PHP (amin'ny PHP-FPM) sy ny MariaDB (LEMP) ao amin'ny Debian 8 Ity lesona ity dia hampiseho aminao ny fametrahana ny tranonkala Nginx ao amin'ny Debian 8. Nginx (nomena hoe "engine x") dia loharano malalaka, open-source, HTTP serivisy avo lenta. Nginx dia fantatry ny fahamarinan-toerana, ny endri-javatra manankarena ...
Ahoana ny fampiasana ny Port Knocking amin'ny Ubuntu mba hanafenana ny port SSH
Ahoana ny fampiasana ny Port Knocking ao amin'ny Ubuntu mba hanafenana ny seranan-tsambo SSH Fantatrao ireo horonantsarimihetsika gangster taloha izay ampiasain'ny ankizilahy iray ny mandondòna eo amin'ny varavarana mba hiditra ao? Ny Porty mandondòna dia izany indrindra, ho an'ny mpanjifanao. Manova ny ssh port default ...
Ahoana ny fametrahana server server amin'ny CentOS 7
Ny fomba fametrahana server miondana amin'ny CentOS 7 Mumble dia fampiharana maimaimpoana natao ho an'ny mpampiasa izay mamela ny mpampiasa hifampiresaka rehefa miresaka. Ny Mumble dia mampiasa tranokala mpanjifa-mpanjifa izay ahitana programa mpanjifa izay mandany asa izay omen'ny ...
Ahoana no hamahana ny hadisoana 403 voarara amin'ny WordPress
Mifandray amin'ny hadisoan'ny 403 Forbidden ao amin'ny tranokala WordPress ianao? Izany dia iray amin'ireo fahadisoana mahatsiravina indrindra izay azon'ny mpilatsaka an-tsitrapo WordPress tonga. Anatin'ity lahatsoratra ity, dia hasehontsika anao ny fomba hamahana mora foana ny famaha 403 voarara ao amin'ny WordPress. Inona ny …
Gmail tricks: 7 zava-mahagaga tsy fantatrareo ny mailaka azonao atao
Ankoatry ny maha-milina fikarohana malaza, Google dia manolotra fitaovana samihafa ho an'ny tranonkala. Gmail dia iray amin'ireo fitaovana malaza izay ahafahanao mandray sy mandefa hafatra tsy voafetra. Na izany aza, na dia efa nampiasa Gmail hatramin'ny 5 taona aza ianao, dia manantena izahay fa tsy ...
Security Paper dia manolo-kevitra ny hanala ny McAfee amin'ny solosaina, mahita olana amin'ny fitaovan'ny OEM
Ny fanadihadiana ara-pahasalamana vao haingana ny ordinatera OEM mitantana ny Windows 10 avy amin'ny Duo Security Inc dia namintina fa ny fitaovana fanadihadiana rehetra dia manana olana momba ny fiainana manokana sy ny olana momba ny protocol. Ny fitoeran'ny laptops, novokarin'i Dell, HP, Lenovo ary Acer, dia nizara ny olan'ny fiainana manokana sy ny filaminana, raha ny sasany ...
Apache afa-po Server Firefox Windows 10 takelaka fikirakirana PHP Video Malagasy Bible HTML Support fitaovana tahirin-kevitra web server WordPress HTTPS bilaogy Linux Mint IP adiresy fitaovana Linux Ubuntu Systems Microsoft Windows Twitter haino aman-jery sosialy fanamarinana SSD Ubuntu 16 Apps hametraka Apple Watch Plugin Fitaovana finday SSH Command famotsorana Database Screen Samsung Galaxy One ' 04 web browser USB "PC Time Phone CentOS Bing CentOS 7 MAMAKA Facebook fitaovana 'App rindrambaiko Ubuntu 14.10 endri-javatra lalao Windows 8 Rafitra fikirakirana SEO Unité centrale MySQL ubuntu 15.04 HTTP fitaovana finday Users Cortana Microsoft app store Ubuntu Samsung OS X Ubuntu (rafitra fandidiana) paoma Chrome taona windows update Unix Windows Phone Plugins fifamoivoizana famerenana Linux finday avo lenta Ubuntu 14.04 API Toetoetra Google vaovao farany ram fikarohana YouTube PPA Windows GNOME Nginx Company command line File PDG bilaogy Android 10 rafitra raki-daza nbsp Debian toe-tsaina lalao iPhone loharano misokatra Up "